BBC News: Itoophiyaan waliigaltee Aljeersi hojiirra oolchuuf, (Baaddimmee kennuuf dirqamte!) – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooBBC News: Itoophiyaan waliigaltee Aljeersi hojiirra oolchuuf, (Baaddimmee kennuuf dirqamte!)
BBC News, Afaan Oromoo | Waxabajjii 05, 2018
Yaada gulaaltota Ayyaantuu.org:
Gochaa fi adeemsi mootummaa gabroomfattuu TPLF yeroo ammaa gochaa mootummaan Dargii bara dhumaa (kufaatii) isaa maayii irratti fudhataa ture wajjin sirriitti wal-fakkaata.
Dargiin bara dhumaa irratti dirqamee mormitoota mariif kadhachuutti dabalee jijjiirama hin yaadamne kan dinagdee, siyaasaa fi lolutummaa adda addaa walitti aansee taasisus gaaffiin ummattoota cunqurfamoo morma hudhee sadarkaa afuura kutuutti waan gaheef, jijjiirama Dargiin gochaa ture adeemsa qabsoo mormitootaa libsuu tokkoofillee dhaabuu hin dandeenye. Qabsoon haqaa gama hundaan geggeeffamaa tures Dargii gar-mlaee sardee mataan sirna nama-nyaataa sanaa akka biyya gadi lakkisee badu dirqisiise.
Mootummaan TPLF maqaaf akka wal-tahiiinsa dhaabbilee maxxannee adda addaa of jalatti qabatee waggoota 27 darbaniif yakka suukkanneessaa fi gara-jabinaan guutame kan dhiifama hin gochisiifne uummata Oromoo fi ummattoota cunqurfamoo biyya sanaa hunda irratti dalagaa ture, yeroo ammaan kana qabsoo hadhooftuu hooggansa ABO jalatti ummati Oromoo fi Qeerroon Bilisummaa Oromoo osoo walirraa hin kutin taasisaniin sirna nama nyaataa gar-malee of-tuulee, dheerina isaa ol bokokee hiixachaa ture, dhoosee duwwaatti yeroo hambisu, murni TPLF kun tooftaa Dargiirraa adda tahe qopheeffatee (lafa keewwatee) jiraachuu fi exit strategy mijeeffatee sa’aatii dhumaa eeggachaa akka jiru mallatooleen mul’isan baayyeen raawwatamaa jiru.
Kanneen keessaa: aangoo sobaa kittilayyoota isaa (TPLF) wajjin yakka hojjechaa turanitti ‘dabarsuu’, hidhamtoota siyaasaa kanneen dhaaba siyaasaa hidhannootiin isa sardaa jiranitti shakkaman irraan kan hafe hunda hiikuu, lafa waggaa 20 oliif seeraan ala humnaan irra qubatee ture mootummaa Eritreaf deebisuuf dirqamuu fi yoo fincilliifi qabsoon hidhannoo Oromoo akkuma jirutti jabaatee itti fufe ammoo gaaffii haqaa uummati Oromoo fi qabsaa’oti kumaatami lubbuu, dhiigaa fi lafee itti wareegaa turanii har’as wareega qaalii baasaa jiran – gaaffii ABBAA BIYYUUMMAA fi HIREE OFII OFIIN MURTEEFFACHUUTTI dirqamee gara deebisuutti deemuun isaa waan oolu miti!
Kanaaf, uummati Oromoo jijjiirama fakkeessii TPLF irraa jalaa fudhachaa jiru bira dabree qabsoo isaa itti fufuudhaan gaaffiin ummati Oromoo haarsaa qaalii itti kaffalaa turee sirna gabroomfataa kana laamshesse, akka TPLF tarkaanfii jijjiirama haqaa fakkeessee diinota isaa duraanii ittiin firoomfatuuf osoo hin taane (hidhamtoota dhaabbilee mormituu habashaa hiikuu, lafa Baadimmee deebisuu, Shek Alamuddiiniin hiiksisuuf yaalii eegaalu kkf) akka gaaffii Qeerroon Bilisummaa Oromoo dhiiga itti dhangalaaseef deebii kennu mudhii hidhatanii qabsoo galmaan gahuun dirqama dhala Oromoo hundaati!!
Bilisummaan Oromoo irra gahee diraamaa ta’uu hin qabu! Bilisummaa fi lafa keenya waggoota 150 oliif sarbamnee, akka ajaa’ibaatti dheebonnee jirru abbuuqqachuun dirqiidha, Oromoof barbaachisaadhas!
Qeerroon hidhamtoota hiiksise, Muummicha Ministeeraa ‘aangoo’ irraa hari’e, lafa Baadimmee Eritreaf deebisiise… waan itti aanee ta’u qabsoo Oromootu murteessa!
Koreen Hojii raawwachiiftuu ADWUI walgahii idliee isaa har’a eegaleen, wal diddaa Itoophiyaafi Ertiraa jidduu tureef furmaata waaraa kennuuf jecha waliigaltee Aljeersiifi urtee Komishiinii Daangaa akka fudhatuu ibseera.
Walididdaa ummattoota obboolota biyyota lameenii jidduu ture hiikuun nageenya walitti fufiinsa qabu uumuuf waamicha daabarseera.
Wal waraansi ALI bara 1990tti eegalee tures, walitti bu’insa daangaa biyyoota Afriikaa kamiyyuu caalaa kan gama lamaaniinu lubbuu namoota hedduu galaafate ta’u kan eere ibsichi, kanneen kumaatamaan lakkaa’amanis naannoo daangaatii buqqaafamaniiru.
Walumaagalattis, waggoota 20 darban keessa ummattoota gama lamaan irrayyu dhiibbaa dinagdee, hawaasummaafi siyaasaa bal’aan gahusaas himeera.
Kanaafuu, walitti dhufeenyi biyyoota lamaan maal ta’u mala? jedhus gaaffii lammiilee Itoophiyaafi Ertiraa akkasumas kan hawasa addunyaa ta’ee tureera.
Wal waraansaaan boodas jaaarsummaa dhabbata motummoota gamtoomaniifi Gamtaa Afriikaatiin waliigalteen Aljeersi taasifamus, waggoottan 20 darbaniif nageenyis ta’e waraanni osoo hinta’iin turaniiru.
Walitti dhufeenya biyyoota lamaanii bakka tureetti deebiisuuf yaaliiwwan garaa garaa taasifamaa turanis bu’a qabeessa hinture kan jedhu ibsichi, amma nageenya dhugaa fiduuf adeemsaafi ejjannoo kana duraatiin adda ta’ee barbaachisa jedheera. Motumooti lamaanu fedhiifi filannoo ummattoota isaaniif eddo kan hinkennine ta’u hinqabaatan.
Kana malees, anatu caalaa jechuun ummattoota lamaaniifu kan hinfayyadne kan jedhu ibsichi, qabannaa’uu rakkina siyaasaafi tasgabbii biyyoota gaanfa Afriikaafi naannawa isaaniif walitti dhufeenyi nagaa Itoophiyaafi Ertiraa furmaata ta’a jedheera.
Kana ta’u hafusaattis carraawwan biyyoota lameeniifi biyyoota Gaanfa Afriikaatiif faayyidaa hedduun nu darbaniirus jedheera.
Kanaafuu ummattoonni faayidaa qofaan osoo hintaanee karaa dhiigaatiin illeen walitti hidhama qaban lamaan kunis bu’aa ummattotaaf jecha motummaan itoophiyaa waliigaltee Aljeersiifi murtee komishinii daangaa gutummaa gutuutti fudhachuun hojiirra olchuuf kan murteesseefi hojiirra olmaasaatifiis murannoon kan hojatu ta’u ibsu barbaada jedheera ibsichi.
Kana malees Motummaan Ertiraas haal-duraa tokko malee ejjannoo walfakkaatu fudhachuun waamicha kana fudhatee walitti dhufeenyaafi nageenya ummattoota lamaan jiddu ture deebiisuun itti fufiinsa isaatiifis akka hojatu waamicha taasiseera.